Sajhasabal.com | Home आगामी तीन दिनको मौसम कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस
रोल्पामा नौ किलो ८२ ग्राम अफिमसहित दुई महिला पक्राउ
पहिरामा पुरिएर गुल्मीमा दुईको मृत्यु
काभ्रेको तीनधारा झरनाका कारण फेरिँदै काफलडाँडाको मुहार
छोकडा बन्दरगाहमा प्रतिबन्ध, ५० कन्टेनर वीरगञ्जमा रोकिए
आगामी तीन दिनको मौसम कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस
असार ३०,काठमाण्डौ । आउँदो २४ घण्टासम्म देशको पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने भएकाले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सचेत रहनअनुरोध गरेको छ ।
देशको पहाडी भूभागमा वर्षाका कारण पहिरो र तराईमा बहने नदीमा जलको बहाब बढेर बाढी जान सक्ने देखिको भन्दै महाशाखाले सचेत रहन आग्रह गरेको हो । यस्तै, हवाई तथा सडक यातायातमा समेत वर्षा र कम भिजिविलिटीका कारण सामान्य अवरोध आउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
अहिले देशको मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहेको र पश्चिमी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भैरहेको छ । अहिले पनि पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा भैरहेको छ ।
आउँदो तीनदिनसम्म मौसम बदली भई देशका विभिन्न ठाउँमा पानी परिरहने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ । सोमबार दिनभर मौसम बदली भई केही स्थानमा पानी पर्ने देखिएको भए पनि राति भने देशभर अधिकांस स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
यस्तै मंगलबार पनि दिनभर मध्य र पश्चिम क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ । मंगलबार राति भने देशभर मौसम पूर्ण बदली भई वर्षा हुने सम्भावना छ ।
साउन १ गते बुधबार पनि देशैभर दिनभर बदली भई केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । बुधबार पूर्वी क्षेत्रमा मौसम बढी सक्रिय हुने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।